လွှမ်းမိုး (၁၉၅၄-၂၀၀၁) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား တေးရေး တေးဆို ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအဝှမ်း ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်သီချင်းများစွာကိုသီဆိုခဲ့သည်။ ရန်ကုန်သားလေးကျွန်တော်ပါ သီချင်းဖြင့် တောရောမြို့ပါအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ကိုပြန်ခဲ့မယ်၊ မအေးကိုချစ်လို့ပါ၊ လူပျောက်ကြော်ငြာ၊ နီနီညိုညိုကိုကို၊ ဆရာမ၊ ကံ့ကော်မြို့တော်၊ အဖေ၊ အချစ်ရှုံးသမားဒဿဂီရိ၊ အခုတော့ပါးစပ်ရာဇဝင်လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ကျန်ခဲ့ပြီ စသည့်သီချင်းများအပြင် များစွာသော တေးအယ်လ်ဘမ်များ ထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာသံတေးများသာမက ဓမ္မတေးများစွာကိုလည်း သီဆိုခဲ့သည်။
သီဆိုခဲ့သော သီချင်း ပုံစံများမှာ
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်များ၏ နှစ်လယ် (၁၉၆၅) မှ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များကြား ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင်ပေါ်ပေါက်ရေပန်းစားခဲ့သည့် Funk ၏မျိုးကွဲဖြစ်သော Go-go ပုံစံ
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များတွင် အမေရိကတောင်ပိုင်း၌ ပေါ်ထွန်းခဲ့သော Country ပုံစံဖြစ်ပြီး
အနောက်တိုင်းဂီတအနေဖြင့် အောင်မြင်စကာလမှ နောက်ဆုံးအချိန်အထိအများဆုံး ဆိုသွားခဲ့သော ပုံစံမှာ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ကျူးဘား၌ပေါ်ပေါက်အောင်မြင်ခဲ့သော Cha-cha-cha ပုံစံနှင့် ၁၉၁၄ နှစ်များတွင် အမေရိက၌ စတင်ရေပန်းစားခဲ့သော Foxtrot ပုံစံဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်မျိုးလုံး Dance ဂီတအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။
Foxtrot ဟန်နှင့်တီးခတ်သွားသော ခေတ်ပေါ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလေ့လာလိုလျှင် အမေရိကန် Pop rock band တစ်ခုဖြစ်သော American Authors ၏ Best Day of My Life သီချင်းကို မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
လွှမ်းမိုးသည် ဂီတနယ်ပယ်တွင်သာမက သရုပ်ဆောင်တွင်လည်း ထူးချွန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးဆုံးပါဝင်သည့် ပန်းသီတဲ့ကြိုး ဇာတ်ကားတွင် ပီပြင်သောသရုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် အကယ်ဒမီရမည်ဟုပင်ထင်ကြေးပေးခံခဲ့ရသည်။ ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများမှာ
- ပန်းသီတဲ့ကြိုး (နေအောင်၊ ခင်သီတာထွန်း) ဒါရိုက်တာဝင်းဖေရိုက်ကူးပြီး ၁၉၈၅ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုအတွက်အမျိုးသားဇာတ်ဆောင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုများရခဲ့သည်
- ဒုစရိုက်သားကောင် (စမ်းပပအောင်) ကျော်ဟိန်းစီစဉ်သည်
- နွေဦးရောက်ပြီကိုကို (ရန်အောင်၊ မေဝင်းမောင်)
- ခေါင်းနဲ့ပန်း (ကျော်ဇေယျ၊ တင်တင်ညို)
- ကြင်နာမယ် ယုယမယ် မြတ်နိုးမယ် (မေသန်းနု)
- မေတ္တာသံစဉ်တေး (နွဲ့နွဲ့မူ၊ ချစ်ချစ်ဇော်)
- ဖေဖေ့သားနဲ့မေမေ့သမီး (ခင်သန်းနု) ၁၉၈၈
- နောင်အင်းလေး ( .....? )
- လူကြမ်း (ဒါရိုက်တာလွှမ်းမိုး၊ ချိုပြုံး)
- လေပွေအဝှေ့မှာဖြင့် (...........?) ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး
- ပန်းပန်လျက်ပါမဗေဒါ (ကျော်သူ၊ ချစ်ချစ်ဇော်)
- အလင်းရောင်ပေါ်ပြီမရီ (တင့်တင့်ထွန်း) ဒါရိုက်တာ စန္ဒာအောင်သိန်း
ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းများတွင်လည်း အသံဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ သူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ ဝတ္ထုဆွေဆွေအောင် ဇာတ်ညွှန်းဒါရိုက်တာစိန်ဝင်း(ဘူမိဗေဒ)၊ အသံသရုပ်ဆောင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမြင့်မြင့်ခိုင်တို့ပါဝင်သော မာနမင်းသား အမည်ရှိကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် မွေးသည်။ ငယ်နာမည်မှာ စိုးစိုး ဖြစ်သည်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသဖြင့် ငယ်စဉ်ကစိတ်မြန်လက်မြန်သမားဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း သိသူကိုဖြစ်စေ မသိသူကိုဖြစ်စေ မတောင်းဆိုရပါဘဲ ကူညီတတ်သောစိတ်ရှိသဖြင့်လည်း လူချစ်လူခင်ပေါသူဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။
အဆိုတော်အဖြစ်မအောင်မြင်မီက ဂစ်တာအတီးသမားအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ကာ အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း King တီးဝိုင်းတွင် lead ဂစ်တာနှင့်ဂီတမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
မကျော်ကြားခင်ကစန္ဒယားချစ်မောင်၏ Double Agent တီးဝိုင်းတွင်လည်း lead ဂစ်တာသမားအဖြစ်တီးခတ်ခဲ့ဖူးပြီး အနောက်တိုင်းခေတ်ပေါ်တေးများ စတင်လာခဲ့သည့်ခေတ်ဦးတွင်ပင် ထူးထူးချွန်ချွန်တီးခတ်နိုင်သော ဂစ်တာသမားအဖြစ် အသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
မိသားစုနှင့်အတူ သီရိလမ်း၊ ပါရမီရပ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် နံနက်တွင် ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ကာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သည်။ 
ပျော်တာပေါ့ အမေရယ် (၁၉၈၁)
လက်ရွေးစင်တေးများ - ၂
ငွေရတု အကောင်းဆုံးတေးများ(၃) (၂၀၀၁)
ငွေရတုအကောင်းဆုံးတေးများ (၄) (၂၀၀၁)
တိတ်တခိုးချစ်သူ (၂၀၀၂)(သိန်းတန်(မြန်မာပြည်)၏တေးသီချင်းများကို ပြန်လည်သီဆိုထားသည်)
ရန်ကုန်သားလေး ကျနော်ပါ (၁၉၇၅)
အလှူရှင် (ချိုပြုံးနှင့် တွဲဖက်၍)
ကားပြိုင်ပွဲ (မို့မို့မြင့်အောင် နှင့်တွဲဖက်၍)(၁၉၈၀)
ကျောင်းပြေးချစ်သူ (မေရွက်ဝါ နှင့်တွဲဖက်၍)
ရွှေခြည်ငွေခြည်ပိုးကြိုးသီ (မာမာအေး နှင့်တွဲဖက်၍)(၁၉၉၁)
ဆောင်းနှင်းမြူနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူ (တွံတေးသိန်းတန် ၏ သီချင်းများအား ပြန်လည်ခံစားသီဆိုမှု) (၁၉၉၃)
ကြည်နူးဖွယ်မင်္ဂလာတေးသီဖြာ (နီနီဝင်းရွှေ နှင့်တွဲဖက်၍)(၁၉၉၃)
ရွှေပန်းရည်ဘဏ်တိုက်(၁) (နီနီဝင်းရွှေ နှင့်တွဲဖက်၍)(၂၀၀၀)
လွှမ်းမိုး ငယ်သူငယ်ချင်း(တရားသူကြီးဟောင်း တစ်ဦး) ၏ငယ်ဘဝအကြောင်းပြောပြချက် အချို့နှင့် သိကျွမ်းခဲ့ဖူးသည့် အတွေအကြုံအချို့